Xirfadaha Bariga Dhexe - Farsamada - Shaqada 🥇 - Qoritaanka
Xirfadda Bariga Dhexe oo leh faahfaahin faahfaahsan
Xirfadda Bariga Dhexe oo leh faahfaahin faahfaahsan oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah Tani waa sababta qoraalladayadu kuu qorayaan. Shaqo raadinta dibadda gaar ahaan dibedda Bariga Dhexe ma fududa. Raadinta xirfad kudhisan UAE. Waxay qaadaneysaa waqti iyo dadaal. Dhinaca kale, haddii aad si sax ah u sameyso waxay kuu shaqayn doontaa.
Mucaaradku waxay u guureen wadamo badan oo Bariga Dhexe. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, shirkaddayada shaqaalaynta ayaa qoreysa qaybtan. Ujeedkeenu waa inaanu ku tusino jidka. Gaar ahaan sida loo helo shaqo Bariga Dhexe.
Shirkadda magaalada Dubai waxay si cad u caawineysaa dadka kale inay shaqo helaan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo shirkaddayada faahfaahsan. waxaad isticmaali doontaa adeegyadayada si aad xaqiiqa u hesho shaqo.
Qatar Bariga Dhexe ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loo adeegsado shaqaalaha caalamiga ah. Adiga oo ah khibrad cusub waa in ay maamushaa raadinta shaqada. Dhanka kale, Kuwait oo leh Bahrain ayaa ah midka ugu fudud ee lagu bilaabi karo shaqada. Sidoo kale Saudi Arabia iyo Masar. Dhamaantoodna waxay u qalmaan in ay raadsadaan xirfad bariga dhexe.
Tani waa sababta ay kooxdayada khubarada u qoraan boostada blog. Shirkadda Dubai City oo maamusha shirkado aad u fiican. Dhamaantood waxaa lagu meeleeyaa liiska kireystayaasha. Sidaas darteed, arrintan maskaxda ku hay, waa inaad ogaataa meesha aad u diri lahayd resume. Sababtoo ah si aad u hesho Xirfad ku haboon Bariga Dhexe. Waa inaad si buuxda wax u barataa.
Sidee ku saabsan Dubai City?
Waxaan ku qoreynaa magaalada Dubai ee cajiibka ah waa hagaha gaaban ee meeshan weyn. Magaalada Dubai waa macluumaad kooban oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Qaybtani waxay ku saabsan tahay caasimadda Imaaraadka Carabta. Dubai oo ku saabsan 2.1 milyan qof. Magaaladani waa mid weyn.
Magaaladda Dubai waa waqti yar oo nolol cusub ah. Qaybtani waxay ku saabsan tahay caasimadda Imaaraadka Carabta. Dubai oo ku saabsan 2.1 milyan qof, waxay ku taala xeebta waqooyi ee emirate. Dubai waa inay martigelisaa World Expo 2020. Qaybta la xidhiidha hagaha nolosha iyo ka shaqaynta Dubai City. Dhanka kale, caasimadda Imaaraadka waa meesha ugu fiican ee dhulka. Ma aha in la sheego meelo kale oo cajiib ah Bariga Dhexe.
Meeshan cajiibka ahi waxay leedahay waxyaabo badan oo wanaagsan. Sida xaqiiqda ah, kor u qaadista wacyi-gelinta Madaarka Dubai. Natiijo ahaan, magaaladan ayaa abuurtay. Gaadiidka weyn ee gaadiidka iyo rakaabka. Waxaa intaa dheer, noqo mid ka mid ah Garoomada Caanka ah ee Bariga Dhexe. Xaqiiqo dhaqaale oo kale ayaa ahaa dakhliga saliidda Texaco Saliideed ayaa markii hore ogaaday gallon oo batrool ah 1969. Tan iyo markaas waxay bilaabaan in ay u socdaan Mareykanka iyo Yurub. Dakhliga saliida ee Dooxda Dubai ayaa saameyn ku yeeshay suuqa Soomaliya oo dhan.
Waxaa sidoo kale jiray horumarinta hore ee magaalada. Bilowgii ayaa bilaabmay oo kaliya waddo iyo dhowr xildhibaan. Guri iyo nolol raaxo leh. Cawska fudud iyo baabuurta gaboobay. Guud ahaan, magaaladan waxay ka bilowday nadiif nadiif ah. Dhinaca kale, kaydka magaaladani wuu kooban yahay. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah heerarkeeda wax soo saarku way hooseysaa Si kale loo dhigo, The emirate galbeedka qaabka dadka ajnabiga ah iyo muwaadiniinta maxalliga ah. Qaabka ganacsiga Carbeed ayaa dhaqaalihiisa dhaqaajiya. Tusaale ahaan hoteelada iyo qaab nololeedka raaxada. Si dhakhso ah u noqo dakhliga ugu weyn ee Dawladda Dubai.
Dubai ma tahay meel aad u qurux badan oo ku yaala UAE?
Magaalada Tani hadda waxay u imaneysaa dalxiis oo raaxo leh. Xukuumaddu waxay sidoo kale si xoog leh u maalgelisay duulimaadyada iyo ganacsiga guryaha. Ma aha in la sheego ilaha ugu muhiimsan ee adeegyada maaliyadeed. Dubai City dhawaan xiisaha dunida. Dadka cusub waxay booqdaan magaalooyinka meelo badan oo adduunka ah.
Maalgashiga ugu weyni waxay sameeyeen sanado ka hor. Iyadoo loo marayo mashaariic badan oo dhismo weyn leh iyo dhacdooyinka isboortiska Waa hagaag, Imaaraadka Imaaraadka Carabta ayaa caanka ku ah. Magaalada caasimadda waxay u noqotey mid calaamad u ah qaab nololeedka raaxada iyo hodanka Carabta. Gawaarida isboortiga iyo guryo qaali ah oo qaali ah.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta iyo Dubai. Dhismaha dhismayaasha waawayn iyo dhismooyinka ganacsiga sare. Gaar ahaan, siyaabo badan ayaa ugu wanaagsan adduunka. Si loo dhammeeyo, iyo in la tilmaamo, maxaa u qalma in ay soo booqdaan meeshan? Waxaa muhiim ah in la ogaado dhismaha adduunka ugu dheer, Burj Khalifa.
Dubai waxay kuu soo dhaweyneysaa mar walba. Ku noqo booqdaha farxada leh ee Imaaraadka. Iyadoo maskaxda lagu hayo in aad naftaada iyo gudaha UAE ku kalsoon tahay. Nasiib wacan. Wakhti wanaagsan.
Aljeriya waxay u dirtay Imaaraadka Imaaraadka Carabta
Aljeriya waxay u dirtay Imaaraadka Imaaraadka Carabta ee Dubai City Company. Shirkaddayada shaqaaleysiinta ayaa ka caawinaysa dadka inay shaqo ka helaan Dubai. Shirkadda ugu wanaagsan ee Aljeeriya
Algeria oo ah wadan aad u yaab leh, Algeria wuxuu aad ugu dhow yahay Imaaraadka Imaaraadka Carabta ee shirkadda Dubai City
Aljeeriya waa mid ka mid ah dalalka dalxiiska. Intaa waxaa dheer, dadka ajnebiga ah ee dibadda u guuraya Dhinaca dhinaca wanaagsan, badanaa Aljeeriya way guurayaan. Sababtoo ah dadka shaqo doonka Aljeeriya doonaya inay shaqo ka raadsadaan Imaaraadka Carabta. Tani waa sababta aan u caawinayno.
Dhinaca kale, Algeria waa waddan Waqooyiga Afrika. Haysashada shaqaale badan oo aqoon leh. Laakiin waxaa jira dad badan. Guud ahaan xeebaha Mediterranean-da. Iyo xitaa laam sahlan. Waxay u guurayaan Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Shirkado badan ayaa sidoo kale shaqaaleysiiya dalkooda. Ka dibna shaqaaleynta shaqaalaha adduunka. Ku socota Dubai ama Abu Dhabi. Waxaa kaloo jira warar badan oo ku saabsan dalkan. Waxaa lagu daabacay The New York Times. Shirkadaha iyo shirkadahaba. Inta badan waxaa lagu daraa shirkadaha Emirates Forbes.
Hoos eeg. Maxaan kuu qaban karnaa. Shirkadda Dubai City ayaa gacan ka geysatay dibad-baxayaasha. Sababtoo ah waxaan sugeynaa in aan helno musharixiin badan. Shaqada Dubai ka soo jeeda Algeria. Waxaan bixinnaa fiisooyinka iyo shaqooyinka bannaan.
Bangiga iyo maaliyadda
Adeegga bangiga iyo mihnadlaha dhaqdhaqaaqa oo dhammaystiran adeeg iyo hagid
Shaqooyinka bangiyada waxay bixiyaan shirkadda Dubai magaalada si ay u dhisaan nidaam cusub oo loogu talagalay xirfadaha bangiga. Qaybtani waxay ku saabsantahay dhammaan dhinacyada dhaqaalaha iyo dhinacyada bangiyada
Bankiga waa qayb kale. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay qoreysaa boosto cusub. Shirkadda magaalada Dubai waxay dhisaysaa nidaam cusub oo loogu talagalay xirfadaha bangiga. Qaybtani waxay ku saabsantahay qaybaha dhaqaalaha iyo baananka. Dadku waxay aad u xiiseynayaan maalgashiga. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay caawisaa oo ay hagto xirfadlayaasha. Aad bay muhiim u tahay inaad dhegaysato indho la'aan. Dhaqaale waa adag yahay, dhanka kale, dhiirigelinta. Gaar ahaan haddii aan ka hadlo shirkadaha waaweyn. Dhammaantood waxay suurtagal noqon karaan oo waxay kor u qaadi karaan hibada guusha. Qaybtani waxay ku siinaysaa masuuliyad. Iyo farxad badan. Samee naftaada hal abuur leh.
Sida xaqiiqda ah, dubista iyo adeegga maaliyadeed, ayaa ah kuwa caan ah. Wadooyin badan oo keenaya lacag. Waxaa jira shirkado badan oo adeegyo maaliyadeed ah oo ku jira dhammaan dhaqaalaha horumaray. Suuqa suuqa iyo shirkadaha maaliyadeed ayaa ka dhaqso badan kuwa kale. Soo hel macluumaad dheeraad ah. Isku day in aad ogaato waa adiga.
Dhab ahaan, ma jiraan meelo juqraafi ah oo loogu talagalay adeegyada maaliyadeed. Waxaas ayaa laga heli karaa, qof walba. Dadka dunida ku nool waxay u muuqdaan inay ku xiranyihiin suuqa maxaliga ah. Dhanka kale, bangiyada oo dibedda u guuraya ganacsi. Xarumaha maaliyadeed ee qaranka iyo kuwa goboleed iyo kuwa caalamiga ah. Horumarinta adduunyada.
Dhanka kale, helitaanka macluumaadka xiiso badan ayaa suurtagal ah shirkaddayada. Waxaa jira laba adeeg oo guud. Midka koowaad waa adeega bangiyada. Midda labaadna waa adeegyo maalgelin bangiyeed. Meel kale, caymis iyo is dhaafsi ajnabi ah. Tani waa sababta aan kuugu soo dhaweyneyno mawduucaan. Ugu dambeyn, samee saameyn. Gaar ahaan waaxda Bankiga. Nasiib wacan. Qaybtani waa tan ugu fiican. Hubso inaad ku biirto.
Talo-siinta shaqooyinka loogu talagalay dadka shaqo doonka ah
Talo-siinta shaqooyinka loogu talagalay dadka shaqo doonka ah waxay tilmaan faahfaahsan ku helayaan shaqo helista
Shaqooyinka iyo Xirfadlaha waxay kugula talinayaan dadka shaqo doonka ah ee adduunka. Maalin kasta raadinta shaqo. Tani waa sababta shirkayadu uga caawineyso dadka in ay helaan hanuun habboon.
Xirfadlaha talobixin, gaar ahaan dadka shaqo doonka ah ee cusub. Shaqaale doonayaasha adduunka. Maalin kasta raadinta shaqo. Tani waa sababta shirkayadu uga caawineyso dadka in ay helaan hanuun habboon. Akhri tilmaankayaga oo dhan ee loogu talagalay xirfadleyda. Tilmaamahan hoos ku xusan wuxuu kooxdeena marwalba hubiyaa. Inaad bixiso macluumaad faahfaahsan. Loo-shaqeeyayaashu waxay u fiirsadeen maamulayaasha leh xirfado dhalaalaya. Had iyo jeer iska hubso inaad ogtahay xirfadaha saxda ah. Dhab ahaan, caawinta shaqo doonka aan la dhigin. Xaaladahaas oo kale, hubi sida ay shirkaddayadu kuu caawin karto. Iyadoo ujeedkani, kooxdayada ayaa sameeysay qaybtan.
Helitaanka xirfad madani ah oo caalami ah. Waxay ubaahantahay horumarinta raadinta heer sare. Samee sumcad si dareen degdeg ah. Talo kale, si aad uhesho hab kale, isku day inaad si dhaqso ah u dhaqanto. Had iyo jeer isku day inaad isticmaasho mudnaanta. Job seekers in dhab ah mar walba isku dayaan in ay gaaraan loo shaqeeyayaasha. Dhanka kale, shirkaddayadu waxay ku siinaysaa jawaabta saxda ah ee helitaanka shaqo. Casharka ugu qiimaha badan ee shaqo doonka. Guud ahaan, iyaga oo ogaanaya meelaha loo diro resume.
Xirfad kasta waa ka duwan yahay. Xaaladdan, maskaxdaada ha u furo fikradaha cusub. Kuwani waxay kugula shaqeeyaan dad guuleysta. Shaqo raadinta ma fududa. Qaado shaqo raadintaada shaqo raadinta. Shirkadeena, waad sameyn kartaa. Hagahayagu waxay bixiyaan xukun dahab ah.
Shirkadaha loogu talagalay aduunka oo dhan
Shirkadaha Dubai ee loogu talagalay inay dunida oo dhan la wareegaan Gulf Jobs.
Shirkadaha u tartamaya adduunka oo idil iyo gobolka Gulf. Waxaan bixinaa qaybta ugu fiican ee saxda ah oo sax ah oo ku saabsan shirkadaha iyo ururada
Shirkadaha adduunka oo idil. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkadeenu waxay abuureysaa liis ay ku qoran yihiin shirkado muhiim ah. Shirkadaha intooda badan waxay bixiyaan saldhigga Gulf-ka. Laakiin dhinaca kale, waxaad ka heli kartaa dhowr ururo oo kale.
Our khabiir ee blog ee Dubai. Qorista macluumaadka, Gaar ahaan shirkadaha, shirkadaha cabbirka dhexe, iyo mararka qaarkood ururada yaryar. Shirkaddayadu waxay bixisaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shirkadaha bixiya. Maaraynta iyo hawlaha shirkad kasta. Sidoo kale noocyada shirkadaha ganacsiga. Xaashiyadayada waa sax. Waddan kasta iyo shirkado.
Himiladayada ugu muhiimsan waa inaan bixino macluumaadka ugu fiican ee suurtogalka ah. Iyadoo maskaxda ku haysa xogta dib u eegista iyo warfaafinta. Sidoo kale macluumaadka bogga iyo shaashadda.
Sidaas darteed, haddii aad raadinayso macluumaad faahfaahsan. Gaar ahaan shirkadaha. Fadlan fiiri hoosta. Dhab ahaan u isticmaalida macluumaadka. Hagaha wanaagsani waa mid la maamuli karo. Shirkaddayadu waxay caawineysaa shirkadaha. Iyo dhinaca kale, caawinta dadka guud ahaan. Si aad u soo ururiso qiimeyn cad iyo cadaadis. Had iyo jeer iska hubso in aad hubisid inaad cusbooneysiin cusub. Sababtoo ah waxaan qoraynaa waxyaabo badan oo cusub. Mid kasta oo hal toddobaad ah.
Shaqooyinka beeraha waxaa loo furay shaqaale xirfadlayaal ah. Inta badan xirfadlayaashu way ogyihiin. Markaa, marwalba hubi inaad isticmaasho kaliya shirkada ugu fiican gobolka Gulf. Ujeedkeenu sidoo kale waa inuu bixiyaa wararka faahfaahsan ee faahfaahsan. Gaar ahaan shirkadaha koraya ee adduunka oo idil.
Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatey tartanka
Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatay inay shaqo ka hesho Dubai
Shirkadda Dubai City waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican qorayaasha ee UAE. Isticmaal adeegyadayada shaqaalaynta. Waxaan ka caawineynaa tartamayaasha inay shaqo ka helaan Dubai
Kooxdayada khubarada ayaa dhab ahaantii ku siinaya macluumaad ku saabsan habka shaqo raadinta. Sida ugu fiican ee loo isticmaalo shaqaalaha ajnebiga ah. Sida xaqiiqda ah, Shirkadda Dubai City waxay ka caawisay shaqaalaha ajnebiga ah ee caalamiga ah. La soo baxa fursado gaaraya labaatan kun oo shirkad Bariga Dhexe.
Khabiiradayada shaqaalaynta ee qandaraas-siinta ee qandaraasyada ah ee loo-shaqeeyayaasha ee Imaaraadka Carabta. Tusaalooyin wanaagsan oo ah adeegyadeena xirfadeed. Meelmarinta shaqaaleynta caalamiga ah. Laga soo bilaabo gobollada sida. Qadar, Saudi Arabia iyo Kuwait iyo Masar. Meelahaas oo dhan, shaqaalaha ajnabigaa waa la kiraysan karaa.
Dhaqdhaqaaqyadu waxay heli doonaan shaqo. Waa in la xasuustaa in aynaan hagaagsannahay oo keliya hagaha caalamiga ah ee shaqo doonka. Shirkadda Dubai City oo si muuqata u soo gelisay shaqaalaha ajnabiga ah ee dibadda ka yimid. Shaqaalaha India, Shaqaalaha Koonfurta Afrika iyo xirfadlayaasha Pakistan. Dhinaca kale, waxaan ka caawineynaa sidii loo ogaan lahaa qofka shaqaaleysiiya bartamaha bari. Natiijada kooxdayada oo ku wargelisay musharaxii ka tirsanaa Imaaraadka Carabta. Si aad u hubsatid in maamulayaasha iyo qalin-jabinta ay heleen shaqada saxda ah.
Tilmaamaha si aad shaqo uga hesho Dubai
Shaqaalaha raadinaya waxay helayaan macluumaad qiime leh. Soo koobiddu waxay eegaan hoosta oo eegaan boostada blog-ka. Shirkadda Dubai City waxay ka dhigeysaa mid la heli karo. From dhan adduunka oo dhan.
Shaqaalaha Filibiin sidoo kale waxay adeegsanayaan adeegayaga si guul leh. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo ku dhawaad ​​dhammaan maamulayaasha. Dhab ahaan way maamuli doontaa caawimaadda. Loo shaqeeyayaasha iyo sidoo kale maamulayaasha shaqaaleynta. Qaadashada qiimaha adoo adeegsanaya adeegyadeena shirkadda. Dhinaca kale, waxaanu la shaqeynay xaqa ay dawladdu leedahay.
Shirkadda magaalada Dubai waa qodob muhiim ah. Gaar ahaan dadka shaqo doonka ah dibadda.
Boggaga shaqooyinka Dubai
Boggaga shaqooyinka Dubai si ay u soo dejiyaan resume iyo hel shaqo
Website-ka shaqooyinka iyo fursadaha shaqada ee hagaha dadka ajnebiga ah. Shirkadda Dubai City ee maamulaysa macluumaad faahfaahsan si ay u gudbiso resume iyo helitaanka shaqo
Boggaga shaqooyinka Dubai si ay shaqo u helaan. Haddii aad raadineyso inaad saameyn ku yeelato xirfaddaada. Isticmaal Compiler. Websaytka shaqadu waa ilaha ugu muhiimsan ee bannaan ee Dubai. Waxaan ka qoreynaa bogagga internetka ee bogga internetka ee Dubai. Caawinta khudbadaha soo xulashada ikhtiyaarka saxda ah. Xaaladahaas oo kale, hoos fiiri. Shirkaddayadu waxay qoreysaa waxyaabo badan. Iyada oo waxkasta loo tixgeliyey in lagu caawiyo inaad hesho riyada shaqada. Sababta oo ah goobaha shaqada ayaa ah kuwa ugu fiican.
Dadka soo booqanaya oo ku cusub Dubai. Qeybta ugu badan, Shirkadda Dubai City waxay cayaareysaa adeega is-bedelka. Shirkadeena buuggani waxay bixisaa macluumaadka ugu qiimaha badan. Mid ka mid ah waa xarumaha qorista. Dhinaca kale, doorka shaqo-bixiyayaasha waxaa inta badan laga heli karaa internetka.
Websaytka shaqooyinka Dubai ma aha oo kaliya shaqaalaha. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay abuurtay macluumaad ku saabsan goobaha shaqada. Xaaladaha qaarkood, waxaanu dib u eegnaa iyo qaybo macluumaad ah. Gaar ahaan kuwaa oo qoraya Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Fadlan ogow sida aad shaqo uga heli karto Bariga Dhexe. Gaar ahaan Dubai. Sababtoo ah caasimada UAE. Noqo mid aad u caan ah oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah.
Boggaga shaqooyinka Dubai ee shaqo helista
Inta badan dadka shaqo doonka ah ee Emirates. Maalin kasta raadinta waxqabadyo xirfadeed oo wanaagsan. Falanqeynta shaqo raadinta dibada ee Dubai. Waqtiga dambe ama mar dambe isku day in dhoobada dib u soo noqoto waddamada dibedda. Maaraynta iyo u dirista codsiyada iimeylka. Sida kor ku xusan, wuxuu noqonayaa furaha shaqo raadinta.
Meelaha shaqooyinka lagu siinayo rajada xirfadlayaasha. Ka caawinta inay bedelaan bay'ada shaqada si wanaagsan. Halkaas waxaad ka dooran kartaa qiyaasta mushaharka sare. Ama shahaadooyinka lagama maarmaanka ah. Haddii aan isbarbardhigeyno qoraallayaasha, meesha aanad sameynin. Website-yada shaqooyinka Dubai waa kuwo aad u wanaagsan.
Dawladda Imaaraadka Carabta. Ka caawinta goobaha shaqo ee horey u marinta tiknoolajiyada qorista. Iyadoo maskaxda ku jirta abuuritaanka fursado. Shirkadaha caalamiga ah si ay u koraan UAE. Bayt iyo Careerjet waa midka ugu caansan Dubai.
Ilaa waqtigan xaadirka ah, si fiican uga warqabo shirkadeena. Isku day inaad na caawiso oo ku dar CV-gaaga. Shirkadaha hoos ku xusan. Diyaarso faahfaahin buuxda oo aad raadinayso dalal dibada ah. Iyo mustaqbalka fog, u noqo kuwa ku faraxsan dibadbaxyada Emirates.
Shaqada Dubai ee caasimada Imaaraadka Carabta
Shaqaaleynta iyo Shaqaaleynta Dubai ee shaqo doonka. Raadi shaqo ku jirta caasimadda Imaaraadka Carabta. La xiriir shirkadaha shaqaaleynta iyo loo shaqeeyaha.
Shaqada Dubai ee shaqo doonka. Shirkaddayadu waxay caawimaad u fidisaa dadka caalamiga ah. Ujeedada helitaanka shaqo. Shirkadeena waxay abuurtay dhowr blog. Ma aha oo keliya shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatay. Si aad shaqo ugu hesho Dubai. Waxaa jira dhowr shirkadood oo kale oo ay shaqaaleynayaan. Shirkadeena ayaa maamusha dib u eegista iyo macluumaadka faahfaahsan ee macluumaadka. Xaaladdan, waxaad ku qaban kartaa shaqo.
Xaaladahaas oo kale, fadlan fiiri boggeena. Sababtoo ah waxaan bixinnaa tusaaleyaal qiimo leh oo ku saabsan sida loo helo shaqo. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, mid kasta oo ka mid ah lataliyahayaga. Isku dayidda in la tuso waddada lagu guuleysto.
Shaqaalaha shaqo doonka ah ee Imaaraadka Carabta. Dadka intooda badani waxay raadinayaan shaqo ku sugan UAE. Iyadoo maskaxda lagu hayo, doorashada magaaladu waa furaha. Dhanka kale, caasimada UAE. Ku noqo ugu caansan UAE. Shaqaaleeyayaasha raadinaya shaqo raadiye. Waxa ugu horreeya ee la xasuusto waa sida loo helo.
Sidaas, sida xirfadlaha ah. Fadlan fursada shirkadeena. Iyo inta badan, fiiri waxa aan kuu qaban karno. Gaar ahaan shaqo u raadinta UAE. Hoos waxaa ku qoran maqaal. Waxay kuugu dhejin doonaan shaqo Dubai. Shaqaaleyaal nasiib wacan. Oo waxaan rajeynayaa inaan mar kale kuu arko.
Shirkadaha raadinta ee maamulka
Shirkadaha Raadinta Macmiilka - Hawlaha Awoodda Shaqada ee Kooxda HR ee Ugu Fiican!
Shirkadaha Raadinta Fulinta ee Europe, Bariga Dhexe iyo Caalamkaba. Waxaanu nahay takhasus taageere udub dhexaad u ah dadka ajnabiga ah ee kooxda HR ee ugu fiican!
Shirkadaha Raadinta Macmiilka ayaa si weyn u qoraya magaalada Dubai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo shirkadeena caawinta dadka si ay u xalliyaan dhibaatooyinkooda. Ururkayagu wuxuu ku guulaystay inuu abuuro kaalmo shaqo raadin. Waxaanu bixinaa tilmaam aad u xiiso badan oo ah Workforce oo ku saabsan adduunka. Sidaas darteed haddii aad raadineyso fursado shaqo oo wanaagsan. Waa inaad hubisaa in aad eegto adeegyadayada shirkadaheena Job Seekers.
Fursadaha shaqo ee ugu fiican ayaa badanaa la leh wakiilada qorista ugu fiican. Shirkaddayadu waxay sameysay taxane sannadaha soo socda waxaa jira boqollaal hay'ado shaqaale ah oo ku baahsan adduunka. Halka waxaan dhab ahaantii ku siin karnaa shaqo shaqo qiimo leh. Oo waxaannu ku guuleysanay inaan dhammaantood meel hal meel ah ku dhigno si ay kaaga caawiyaan helitaanka macluumaadka qiimaha leh.
Sidaa darteed waxaad u egtahay qof raadinaya wakiilada qorista sarsare ee ugu sareeya ayaa dhab ahaantii heli kara macluumaad badan oo cadcad. Laga soo bilaabo Manpower ilaa DHR International iyo xakameynaya shaqo raadinta iyo hay'adaha shaqaaleynta ee adduunka oo idil. Guud ahaan, sida aynu wada ognahay wakiillada fasaxa ugu fiican ayaa ku yaal magaalada Dubai iyo dabcan Abu Dhabi.
Qorayaasha qora Bariga Dhexe
Sidaas awgeed, shirkadda Dubai ee magaalada Dubai waxay ku guuleysatey inay sidan u baxdo oo ay ku siiso hagaha ugu fiican ee raadinta shaqo ee caalamiga ah. Sidee loo sameeyaa xaqiiqda dhabta ah waa culays culus oo ku saabsan liistada madaxda cusub ee qorista. Sababtoo ah waaxdeena sahayda bani'aadamnimada mar walba kugula talinaysa dadkeena barta. Tusaale ahaan, waxaan ku soo gudbineynaa macluumaadka xiisaha leh ee luuqadaha kala duwan. Sidaa darteed dadka ka soo jeeda Bariga Dhexe iyo Europe Yurub waxay ka heli karaan macluumaad wanaagsan oo ku saabsan shaqooyinka Dubai.
Dhinaca kale, waxaan sidoo kale isku deyeynaa inaan kula talino oo bixinno talooyin ku saabsan sida loo helo shaqo Bariga Dhexe. Sababtoo ah maadaama aan nahay shirkad maamusho gobolkan oo magacayagu si fiican u yaqaan. Sidaas darteed waxaad ka heli doontaa macluumaad aad u wanaagsan oo sax ah oo ku saabsan sida shaqo looga heli karo Qadar si loo sugo iyo xataa Sacuudi Carabiya.
Waxaan nahay maamulayaal sare mar walba waxaan sugeynaa shaqo cusub oo doonaya kuwa ku biiri doona shirkadeena waxayna diiwaan gelin doonaan CV. Sidan oo na siinaysa caawimaad waxbarasho. Sababtoo ah ka dib sanado badan oo wada shaqeyn ah waxaan ognahay sida aad kuugu qori kartid Bariga Dhexe.
Expat Sida loo noqdo Mid ka mid ah iyaga?
Expat, inta badan, dadku si fiican ayuu u yaqaanaa. Waa fududahay qofka shaqo raadinaya dibedda. Ama horay uga shaqeynayey meel ka duwan waddankoodii hooyo. Waxaa jira sababo badan. Dadka qaarkood waxay raadinayaan shaqo dibadda si ay lacag badan u sameeyaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah madaxda ayaa raadinaya shaqo si ay u korodho heerkooda. Gaar ahaan xaaladaha nolosha. Tani waa sababta ay dadku u noqonayaan dadka ajnabiga ah.
Dadka qaarkood ee ku shaqeeya waddanka dibaddiisa oo leh macne gaar ah. Isla markiiba isku day in aad noqotid dalxiis waa sababo shaqo awgood. Xaaladaha badankood. Qaar ka mid ah xirfadlayaashu waxay ku dhacaan xirfad leh meel cusub. Waxaad noqon kartaa qof cusub. Ama xitaa bedel meel. Taasina waxay ku timid macnaha Expat.
Dhinaca kale, dadka badankood. Weli raadinta hagitaan xirfadeed. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Shirkadda Dubai City waxay soo saartay barta blogka. Waxaan ka duwanahay bogagga kale. Sababtoo ah waxaan bixinnaa macluumaad buuxa oo faahfaahsan. Halkii ay ka heli lahaayeen siyaabo caadi ah. Kooxdayadu waxay kugula talinayaan oo ay ku wargelinayaan noloshii qurbaha. Kooxdayadu waxay qoraan qoraallo faahfaahsan. Waxaana isku dayeynaa inaan ilaalinno dhammaan waxyaabaha la tixgeliyo. Taasi waxay caadeysteen inay ku noolaadaan dibedda.
Noqo qof ajnabi ah kana shaqeeya debedda
Waxaa muhiim ah in la ogaado, in dadka intooda badani ay noqon karaan shaqo raadiye caalami ah. Dadka booqanaya wadamada kale. Si kastaba ha noqotee, ma aha go'aanada in qurbajoogu noqon doono noloshooda. Sabab kasta ha noqotee inaad u guurto debedda.
Hagahayaga, waxaad noqon kartaa dalxiis. Kooxdayadu waxay abuurtay tusahan tilmaamahan shaqaalaha. Inta badan macluumaadka waxaa ku jira wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato marka aad dibedda u guureyso. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, ha haawin wakhtigaaga iyo hoos eeg. Sababtoo ah shirkadda magaalada Dubai oo dooneysa inay kaa caawiso inaad noqoto dalxiis.
Sidee baa looga noqon karaa iyaga oo ka mid ah Dalkayga?
Expat, waxaa jira sababo badan. Qaar ka mid ah dadka raadinaya shaqo dibadda si ay lacag badan u sameeyaan. Qaar ka mid ah madaxda sare waxay raadinayaan shaqo si ay kor ugu qaadaan heerkooda
Shaqaalaha Filipino ee Dubai
Hadda shaqaalaha Filipino ayaa shaqo ka heli kara Dubai - Hel shaqo ugu fiican ee Imaaraadka Carabta.
Shaqaalaha Filipino ee Dubai. Fadlan akhri faahfaahin faahfaahsan waxaanad ka heleysaa shaqo Imaaraadka Carabta. Filipinos ilaa Dubai ama Abu Dhabi
Shaqaalaha Filipino ee Dubai, ayaa ah kuwo aad loo qiimeeyo. Shirkado badan ayaa shaqaaleysiiya. Sababtoo ah dad badan oo ajnabi ah ayaa u fiican inay la shaqeeyaan. Sidaa darteed, dhinaca kale, noqo mid ka mid ah. Isku day inaad shaqo ku qabsato shirkadeena Emirates. Kooxdayada ayaa gacan ka geysaneysa in la dhigo. Gaar ahaan Bariga Dhexe. Dhinaca kale, kooxdayada ayaa sidoo kale gacan ka geysaneysa Gulf Jobs.
Shaqaalaha dalxiisayaasha ka yimaada Filinka ayaa imanaya Emirates. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay kugu hagayaan adiga. Guud ahaan shaqaalaha Filipino. Miyuu dalka saddexaad u yahay shaqada UAE ?. Just ka dib markii shaqaalaha Asian. Shirkadda Dubai City ayaa gacan ka geysatey ajaanibta. Tilmaamahan waxaa si gaar ah loogu sameeyey dadka reer Filibiin. Tani maskaxda ku hay, fiiri sida aan u maamuli karno. Raadin shaqo oo cusub.
Sida dalxiisku uu isku dayo inuu shaqeeyo gram. Ku soo dejinta shirkadda Dubai City. Oo ka noqo shaqaale aad u fiican oo ka socda Imaaraadka Carabta.
Macluumaadka Google Dubai
Waxaan ku siinaynaa Google Guide Guide. Iyo hagaha dhammaystiran oo ku saabsan sida shaqo looga helo IT.
Google Dubai oo ah hagid dhamaystiran oo ku saabsan sida shaqo looga helo IT. Dadku waxay raadinayaan shaqo UEA. Google wuxuu bixiyaa shaqooyin badan. Ogow sida loo bilaabi lahaa.
Warbixinta Google Dubai ee dadka. Dhammaan wax ku saabsan ururkan malaayiin doolar. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaatid shirkadaha Google iyo IT. Shirkadaha horay u raadinaya dib u eegis wanaagsan. Xaaladahaas oo kale, haddii aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso Google. Iyada oo hagayaalkayagu, wakhti dheer, khudbado waxay helayaan macluumaad ku filan. Guud ahaan, shirkadkayagu waxay bixisaa hagid faahfaahsan oo ku saabsan xirfadda IT.
Shirkadda Google waa urur ballaadhan oo bil walba ah. Dhanka kale, shaqaaleynta kumanaan shaqaale. Abuuri dakhliga aadka u sareeya ee ku dhawaad ​​dhammaan wadamada. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa haboon in la eego ururkan.
Shirkadadayadu waxay had iyo jeer si fiican u eegaan xafiisyada Google Dubai. Sababtoo ah waxaanu jecelnahay waxa uu Google sameeyo. Shirkadda khaaska ah ee shirkadda Dubai ee maamusha boostada. Dhowr jeer sanadkiiba. Xaaladahaas oo kale, hoos fiiri. Fadlan ogow wax badan oo ku saabsan Google. Waa maxay sababta ugu fiican. Sidee loo shaqaaleynayaa? Iyo sida loo maareeyo wadada iyaga.
Warbixin faahfaahsan oo dowladda ka
Laga soo bilaabo muwaadiniinta maxaliga ah ilaa Internationals. Dhammaantood waxay ka shaqaynayaan xaqqa dawladdu. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan soo bandhignay qayb cusub. Dib-u-eegis faahfaahsan Dowladda Xaaladahaas oo kale, waxaan ka caawinaynaa dadka inay helaan macluumaad dheeraad ah.
Shirkadda magaalada Dubai oo ku saabsan mawduucan. Sababtoo ah waa qiimo ay leedahay in la eego maqaaladayada. Xaqqanta Dawladdu waa nidaam ama koox dad ah. Shabakadaha caanka ah ee caanka ah. Ma yihiin madaxda sare. Dabcan, midkeenu waxaan ku raacsan nahay qoraal. Maamulidda bulsho habaysan. Dhammaan ma ku jiraan koox dad ah. Shirkadaha badanaa waa ganacsi gobolka.
Xaaladda ururinta macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shirkadaha dawlada. Faahfaahinta, xaqiijinta qeexidda qeexida guud. Shirkadaha wada shaqeeya waxay caadi ahaan ka koobanyihiin sharci dejinta. Intaa waxaa dheer, fulinta, iyo shaqada. Garsoorka cusub ee caawiya ururada. Markaa hubi inaad akhrido hagidkayaga. Xaaladahaas oo kale, isku day inaad adeegsato hagidkayaga. Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkaddayadu waxay kugu caawinayaan. Hoos eeg. Waxaan rajeyneynaa inaanu kuu qiimeeyno. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waan kuu maareyn doonaa.
Mid ka mid ah tusaalayaasha kooxdayadu bixiso. Meela ay tahay in la gaaro xaq u lahaanshaha. Iyaga oo ku kalsoon in dadku helaan macluumaad faahfaahsan. Nasiib wacan. Iyadoo tan maskaxda ku haysa, aragto boggeena. Waxaan u qori karnaa, oo faahfaahsan oo ku saabsan Gov.
Macluumaad faahfaahsan oo ka socda shirkadda Dubai City
Macluumaad faahfaahsan oo ka socda shirkadda Dubai City. Ma waxaad tahay qof dalxiis ah oo raadinaya xuquuqda Gov. Hoos ka eeg maqaalkeena
Tilmaanta Shaqada ee Dubai
Tilmaamaha ka shaqeeya Dubai ee shaqaalaha caalamiga ah. Kooxdayada takhasus leh. Qoridda maqaallo loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Marka, xaaladahaas, isku day talooyinkayaga iyo talo. Sababtoo ah helitaanka shaqo-bixiyeyaasha Emirates waa waxa ugu fiican ee aan sameyno.
Kooxdayadu waa hogaamiyayaal hoggaamiyeyaal ah kuwaas oo laga helay Dubai iyo Abu Dhabi. Shaqaalaha adduunka oo idil. Dib u eegista ku socota Dubai. Dhinaca wanaagsan, shirkaddayada siiya caawimaad shaqo doonka.
Tilmaamaha Inaad Ka Shaqeysid Dubai oo leh talooyin faahfaahsan shaqaalaha caalamiga ah. Sababtan awgeed, waxaad u baahan tahay talooyin iyo khibradaheena. Shaqaalaha cusub iyo kuwa hadda shaqeeya waxay raadinayaan shaqo shaqo shirkadeena. Sidaas awgeed waa inaad isku daydaa adeegyadayada Isutagga Imaaraadka Carabta.
Ku noolaanshaha iyo ka shaqeynta Dubai. Dhab ahaan, markaad u guurto UAE. Waxaad noqon kartaa mid ka mid ah shaqaalaha ugu mushaarka badan. Sida xaqiiqda ah, xirfad cusub oo xiiso leh ayaa dhici karta oo keliya Dubai.
Waayo, hal arimood oo noloshaada ah. Shaqada Bariga Dhexe ayaa u qalantaa inay tagaan. Si kastaba ha ahaatee, guuritaanka iyo degitaanka Emirates. Qaadashada wakhtiga iyo dadaalka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan kuu soo qoraynaa tusaalahan.
Ka shaqeynta Dubai sida dalxiis
U guurida wadan cusub. Gaar ahaan waddanka Muslimiintu wuxuu noqon karaa shaqo adag. Sababtoo ah ajaanib cusub oo ka socda adduunka oo idil. Dhammaantood waxay imanayaan Emirates si ay shaqo u helaan. Gaar ahaan haddii aad maamusho aqoon la'aanta.
Shirkadda magaalada Dubai waxay ogtahay sida arrimuhu u dhaceen degaanka maxaliga ah ee Dubai inay noqdaan mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu xiisaha badan ee noloshaada. Si kastaba ha noqotee, guuritaanka iyo degitaanka waddan cusub waxay noqon kartaa murugo gaar ahaan haddii aadan haysan aqoon wax ku ool ah sida wax loo sameeyo Bariga Dhexe. Shirkadda magaalada Dubai waxay tilmaamaysaa hagayaal faahfaahsan dhammaan dhinacyada qorista ee UAE. Sababtoo ah nolosha ugu adag ee Dubai waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu adag.
Si kastaba ha ahaatee, guuritaanka iyo degitaanka magaalada aad u qaali ah sida Dubai. Bilowga kharashka. Qaar ka mid ah dadka shaqo doonka ah waxay maareynayaan oo ay halgamayaan bilowga. Inta badan dadka ajnabiga ah waxay u baahan yihiin tilmaan si ay uga shaqeeyaan Dubai. Sababtoo ah dal cusub ayaa laga yaaba Gaar ahaan haddii ay ka guuraan dalalka dibedda. Si aan u dhammeeyo, fiiri maqaaladayada. Akhri xiisaha. Oo waxaad ka heleysaa shaqo ka socota Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Tilmaamaha Inaad Ka Shaqeysid Dubai oo leh talooyin faahfaahsan shaqaalaha caalamiga ah
Tilmaamaha Inaad Ka Shaqeysid Dubai oo leh talooyin faahfaahsan shaqaalaha caalamiga ah. Macluumaadkeena, waxaad ku ogaan doontaa sida shaqo looga helo Dubai.
Gulf Jobs iyo shaqo raadinta
Gulf Jobs oo ka shaqeynaya dibadda si ay caalamka ugu raadsadaan xirfadlayaal
Xirfadaha Gobolka Gulf oo ka shaqeeya dibadda si ay caalamka ugu raadsadaan xirfadlayaal. Sida xaqiiqda ah, xirfad ku taal aagagga gulf waa mawduuca xiga ee our blog
Shaqooyinka Gulf waa bartilmaameedka ugu muhiimsan ee ajnabiga. Shirkadda Dubai City ayaa si cad u bixisay. Dhinaca kale, shaqo raadiyaha ugu waawayn ee raadinaya shaqo. Ka imanaya dhammaan qaaradaha. Hindiya iyo Pakistan iyo sidoo kale US Canada iyo Turkiga. Dhammaantood waxay raadinayaan shaqo ku yaal Gacanka.
Gulf Jobs oo ka shaqeynaya dibadda si ay caalamka ugu raadsadaan xirfadlayaal. Sida xaqiiqda dhabta ah, xirfad ku taal gulf waa mawduuca xiga. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu heli karo shaqaalaynta Gulf Area. Si aad uhesho qaab kale, waxaad ka heli kartaa boosaska bannaan ee dhowr dal oo Gulf.
The Dawladaha Carbeed ee Gacanka Ciraaq. Ma caan baa loo jecel yahay raadinta shaqooyinka. Sababtoo ah waxaa jira toddobo dawladood oo Carab ah oo xuduudda Khaliijka Faarax.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad samayn kartaa cilmi-baaris ku saabsan shaqooyinka banaan. Iyadoo wadamada Khaliijka ugu fiican. Tusaale ahaan mustaqbalka Bahrain, waxay xiiseyneysaa adeegga macaamiisha. Ma aha wax shaqo ah oo badan oo Ciraaq ah marka laga reebo kaabayaasha.
Dhinaca kale, hagidkayaga, waxaad yeelan doontaa baaritaan faahfaahsan. Mid ka mid ah tusaalayaashu waa shaqooyinka deynta ee Kuwait iyo Oman. Waxaa jira Qadar oo leh Sacuudi Carabiya iyo United Arab Emirates (UAE).
Iyada oo dhammaan meella kasta oo cajiib ah, waxaad sameyn kartaa cilmi-baaris. Iyo si hubaal ah in shirkadeenu kuu hagaajin doonto. Kooxdayada sare ee maamulka ayaa qoraya macluumaadka loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Hoos ka fiirso oo akhri hagaha blog-ga. Shirkadda magaalada Dubai waxay halkan u tahay inay ku caawiso. Shaqaaleyaal nasiib wacan.
Tilmaamaha Daryeel Caafimaad ee Dhakhaatiirta, Kalkaalisooyinka, iyo Isbitaalka
Waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan Hagaha Daryeelka Caafimaadka ee Dhakhaatiirta, Kalkaaliyayaasha, iyo Isbitaalka. Xirfadlayaasha waxay raadinayaan macluumaad faahfaahsan. Shirkadda Dubai City oo soo saartay maqaallo.
Daryeelka caafimaadka, hagaha faahfaahsan ee xirfadlayaasha dhabta ah. Shirkadda magaalada Dubai waxay maamushaa qodobo aad u faahfaahsan. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waxaanu caawinaa dadka. Helitaanka qiimaynta faahfaahsan ee faahfaahsan ayaa ku caawin kara. La soco waddo cusub ganacsi. Ku caawi inaad hesho dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad.
Qeyb kale oo xiiso leh oo leh Blog Blog. Gaar ahaan loogu talagalay xanaanada. Sidoo kale dhakhaatiirta kale ee isbitaalka ee la xiriira. Qaybaha daryeelka caafimaadka ee takhasus leh. Sababtoo ah waxaad ka heli kartaa xirfadle caafimaad oo badan. Laga soo bilaabo shaqo raadinta iyo maamulayaasha shaqaaleynta. Ilaa dib u eegis ku saabsan isbitaalada.
Isbitaalada asalka ah, waxay xiiseynayaan ganacsiga. Tusaale ahaan mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Bariga Dhexe. Xirfadlayaasha waxay u dhaqaaqayaan Bariga Dhexe. Iyo dhinaca kale iyada oo aan macluumaad ku filan. Tani waa sababta aan u bixineyno hage. Daryeelka caafimaadka, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo isbitaallada.
Fadlan fiiri hoosta. Oo haddaba waannu idinku hagaynaa. Hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka. Iyo noqo akhriste maqaalkeena. Xaaladahan oo kale, waxaan ku martiqaadeynaa. Dunida Isbitaalada ee si kale loo yiraahdo, qiimo jaban.
Hagaha Hotel iyo macluumaadka
Hagaha hudheelka iyo dib u eegista macluumaadka shirkadaha
Waxaan sidoo kale bixinaynaa macluumaad ku saabsan hage hudheelka iyo macluumaadka, dib u eegis faahfaahsan oo ku saabsan shirkadaha. Nidaamka warshadaha ee martigelinta ee codsiga iyo dhammaanba hoteelada
Hagaha hudheelka iyo macluumaadka martida. Waxaan ka caawinaynaa dadka in ay wax badan ka ogaadaan ganacsiyada martida. Sidee loo sii wadi karaa macluumaadkan maxkamada. Marka loo eego xaaladahaas, Shirkadda Dubai City ayaa faahfaahin ka bixisa fariimaha blogga
Dadka raadinaya internetka wixii macluumaad ah. Mid ka mid ah waa isbitaalada. Shirkadda magaalada Dubai ayaa bixisa. Qeyb ka mid ah macluumaad qiimo leh oo ku saabsan hoteelada. Shirkadeena marwalba caawinta dadka. Gaar ahaan, warar cusub iyo dib u eegis cusub.
Guud ahaan, waxaan isku dayeynaa inaanu caalamka ku daboolno. From Europe ilaa UAE. Kanada iyo Australia ilaa Bariga Dhexe. Tani maskaxda ku hay, waxaanu raadinaynaa inaan ku caawino. Qeybta ugu badan, waxaan ku qoreynaa shaqo raadinta. Waqti marba, fiiri maqaaladayada. Waxaan had iyo jeer bixinnaa sheekooyin qiimo leh. Sababta oo ah hagayaalkayagu badanaa waxaa loogu talagalay dadka. Sida adiga iyo aniga. Weligeenna kama sii daynin. Ilaa iyo inta aan helnay mawduuc. Waanu daboolaynaa. Boodhadhka ugu fiican ee haysta dhagaystayaasha saxda ah. Tani waa sababta aan ujeeddada u fiicanahay.
Hindisaha wargeysyada ee shaqo doonka
India Wararka ku saabsan xirfad-shaqo doon ah oo ka timid Aasiya. Ogow habka aad ugu guurto Dubai. Shirkadda magaalada Dubai waxay u qoreysaa shaqaale Indiya Shaqaalaha Macluumaadka loogu talagalay xirfadaha shaqo-doonka ah ee Aasiya. Ogow habka aad ugu guurto Dubai.
Shirkadda magaalada Dubai waxay u qoreysaa shaqaale Indiya Shaqaalaha Macluumaadka loogu talagalay xirfadaha shaqo-doonka ah ee Aasiya. Ogow habka aad ugu guurto Dubai. Shirkadda magaalada Dubai waxay u qoreysaa shaqaale Indiya
Macluumaadka ku saabsan Hindiya. Fursadaha Hindiya ee Dubai. Falanqaynta Hindiya ilaa Dubai. Intaas oo dhan waa mid ku jirta qaybtayada. Inta badan dadka dunida ku nool waxay raadinayaan shaqo. Dhaqdhaqaaqa Hindiya gaar ahaan. Waxay raadinayaan shaqo ku sugan Imaaraadka Carabta.
Shirkadeena ayaa hogaamineysa oo hagaya. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, inaad leedahay khibrad fiican Bariga Dhexe. Dhab ahaantii waxaad ka dhigi kartaa shaqaale karti leh. Dhinaca kale, haddaad rabto in aad dib u guurto. Shirkadda magaalada Dubai waa isbeddel sahlan adiga. Sida xaqiiqda ah, raadinta shaqadu waxay qaadataa waqti. Tani waa sababta shirkadeena caawisa Aasiya oo u tartameysa in ay u guurto Imaaraadka Imaaraadka Carabta.
Shaqaalaha India waa kuwa ugu fiican. Sidoo kale, mid ka mid ah kuwa ugu caansan UAE. Sidoo kale qaar ka mid ah ka shaqeeya Kuwait, Sacuudi Carabiya, iyo Qadar. Guud ahaan wadamada Gulf oo dhan. Sidaa darteed, waa inaad akhridaa hagayaalkayaga loogu talagalay Asian expats.
Shirkadda Dubai City ayaa ku tusi doonta habka. Laga soo bilaabo Visa iyo u guurista Dubai. Ilaa sida loo helo shaqo Dubai ka timaada Hindiya. Iyo inaad shaqo ka hesho Dubai.
Wareysi loogu talagalay Shaqada Dibadda
Wareysiga shaqo dibedda ah waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah
Nidaamka wareysiga ee shaqada ee dibada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo maareeyo habka ugu horeysa ee xirfadlaha ah ee loo shaqeeyaha mustaqbalka Codsiyada iyo talooyinka dadka ajnebiga ah.
Waraysigu waa kan ugu muhiimsan. Haddii aanad haysan, shaqo ma qaban kartid. haddii aadan lahayn xiriir xoog leh. Shirkaddayadu waxay qoreysaa faahfaahin faahfaahsan dadka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan abuuray qayb cusub. Nidaamka wareysiga ee shaqada dibadda. Dhinaca wanaagsan, mawduucan ma aha mid adag in la dhaafo. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ku sameyso xaqiiqda waa inaad ogaatid sida loola macaamilo. Wareysigu waa hab faahfaahsan.
Inta badan dadka. Dib u eegista marxaladda wareysiga ee shaqada dibedda. Hagahayaga, waxaad ku ogaan kartaa sida loola hadlo inta aad shaqaaleysiineyso. Saameynta hadalka iyo xirfadlaha ayaa fure u ah shaqaalaynta.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo maareeyo habka ugu horeysa ee xirfadlaha ah ee loo shaqeeyaha mustaqbalka Codsiyada iyo talooyinka dadka ajnebiga ah. Gaar ahaan haddii aad adagtahay waxaad u baahan tahay inaad naga akhriso hage faahfaahsan. Dhinaca kale, haddii aad haysato shahaadooyin. Tilmaamaheenu wuxuu kaa caawinayaa sidii aad u baran lahayd. Waayo-aragnimada ugu muhiimsan waa wajiga wajigiisa. Nasiib darro, ma aha in qof walba raaxo leh.
Tani waa sababta ay kooxdayadu kugu caawineyso inaad ka gudubto. Sababtoo ah haddii aad maareyn kartid. Intaa waxaa dheer, ma garanayo sida aad isu diyaarinaysid. Akhri warbixinteena blog-ka. Hel aqoonta lagama maarmaanka ah. Oo ha ka dhigo.
Shaqooyinka Dubai ee 2019 iyo 2020
Shaqooyinka Dubai Dubai 2019 iyo 2020 oo loogu tala-galay dadka qurbaha ku nool iyo muwaadiniinta maxalliga ah ee UAE. Qeybtaani guud ahaan waxay ku hadashaa. Ku saabsan sida loo helo shaqo Dubai ka jirta 2020. Tilmaame kale oo muhiim ah oo shirkaddayadu ka dhigteen Emirates. Ma hubtaa macluumaad ku saabsan meesha laga codsan karo shaqada 2020. Waa maxay fursadda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee dadka ajnabiga ah?
Kooxdayada shaqaaleysiinta ayaa hagaya shaqaalaha shaqaalaha Bariga Dhexe. Caddaymaha ugu adag ee aad shaqo ka heli karto UAE. Guud ahaan, waa in la ogaado meesha loo diro CV-gaaga. Dubai dhab ahaantii waa meesha ugu fiican ee lagu noolaan karo oo loo shaqeyn karo.
Laga soo bilaabo maareynta ganacsiga, kooxda iibka, iyo injineernimada. Dhamaan fursadaha xirfadeed ee xirfadlayaasha ah ayaa diyaar u ah tartanka Dubai. Soo-booqdayaasha cusub ee ku-meel-gaarka ah waxay xaqiiqdii ka heli karaan xaafadda Dubai 2020. Isla mar ahaantaana xitaa soo ogow sida loo maareeyo dib u noqoshada Dubai. Waxaa intaa dheer, tusaalaha ugu fiican ee warqadaha codsiga. Iyo sida loola xiriiro wakiilada qorista. Dhammaan waxaas ayaa laga heli karaa boggayaga blog-ka. Kooxdayada lataliyayaasha xirfadlayda waxay sugayaan in dib loo bilaabo.
Shaqooyinka loogu talagalay dadka ajnabiga ah ee Dubai 2020
Isku day in aad noqoto dalxiis ku yaalla UAE. Inta badan dadka, marka ay dhacdo, booqashada UAE. Kaliya booqasho fiiso. Laakiin inta badan, shuruudaha loo baahan yahay waa fiisada shaqada. Markaa hubi inaad akhrisid hagaha guud ee shaqada Dubai. Kooxdayadu waxay eegayaan in ay badanaa kugu arkaan. Fadlan ogow sida loo helo shaqo ku jirta Emirates ee 2020. Shaqaaleyaal nasiib wacan.
Shirkadda Magaalada Dubai ee caawisa shaqaalaha. Macaamiisha cusub iyo kuwa hadda jira waxay helayaan shaqooyin cusub oo bannaan oo shirkadeena ah. Isku day in aad noqotid mid ka mid ah oo aad bedesho qaab nololeedkaaga. Marka la eego qodobbadaas, kooxdayadu waxay kugu martiqaadeysaa inaad ka shaqeyso Dubai 2019. Kooxdayada ayaa had iyo jeer ku soo bandhigaysa jagooyinka cusub ee la cusbooneysiiyey ee ku yaala kanaalada warbaahinta bulshada. Dhinaca kale, waxaan had iyo jeer wada shaqaynay dadka kale. Tusaale ahaan Bayt.com iyo CareerJet. Si guul leh u meeleynaya musharixiinta dibedda si ay uga shaqeeyaan dibedda Dubai.
Shaqooyinka Dubai Dubai 2019axay u tahay qurbajooga iyo muwaadiniinta maxalliga ah ee UAE
Shaqooyinka Dubai Dubai 2019, oo ku saabsan sida shaqo looga heli karo dibedda Dubai. Raadi shaqo ku jirta Imaaraadka Carabta. Naftaada u samee hagaha saxda ah ee riwaayadaha
Shaqooyinka India oo leh maamulayaasha shaqaalaynta. Shirkaddayadu waxay hadda kiraynaysaa Hindiya. Ilaa waqtigan xaadirka ah, waxaan heleynaa codsiyo. Gaar ahaan shirkadaha India. Sababtoo ah waxay raadinayaan maamulayaal badan. Iyadoo maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay maamulaysaa shaqooyinka banaan.
Sida xaqiiqda ah, waxaan ka caawinaynaa dadka inay noqdaan shaqaale. Iyadoo taas maskaxda ku haysa, dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah waxay kor u qaadayaan shirkadeena. Tusaale ahaan, waxaan ku sameyneynaa taageerayaal wayn oo Facebook iyo Linkedin. Sababtoo ah shirkadeennu waxay u adeegsanaysaa maamulayaal. Dhinaca kale, waxaa jira shirkado badan. Taasi waxay kooxdayadu la shaqaynaysaa. Dhinaca wanaagsan, waxaan sidoo kale shaqaaleysiineynaa dhowr qaybood. Tusaale ahaan waa waaxda IT iyo marketing. Sidoo kale injineerada Hindiya. Iyo fursado shaqo oo la xidhiidha dowladda.
Kooxdayada shaqaale xirfadleyaal ah. Iyo sidoo kale tababarayaal kheyraad aadane oo heer sare ah. Hadda u dhaqaaqida suuqa shaqada ee India. Xataa xitaa kooxdeena, waa wax aad u cusub. Laakiin, dhab ahaantii, waxaannu rajaynaynaa dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah. Dhibaato ma leh waayo-aragnimadeena shirkaddayadu leedahay. Kooxdayada xulashada koowaad waxay ahaan doonaan shaqaale Hindi ah.
Shirkadda Dubai City waa mid xiiso leh. Kooxdayadu waxay ka shaqaynayaan inay caawiyaan dadka Hindida ah. Waxaan sidoo kale sidoo kale ka caawineynaa sidii aan ku heli laheyn shaqooyin Mumbai. Mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee u shaqeeya sida hoggaanka India. Waqtigan xaadirka ah Mumbai waxaa ka sarreeya dadweynaha 16 million. Taasi waxay faa'iido weyn u tahay. Gaar ahaan kuwa ka mid ah madaxda sare. Shaqooyinka Mumbai ma fududa in la helo. Sidaa darteed, raadso fursado mustaqbalka ah ee Career ee shirkadaha Mumbai. Dhinaca kale, magaalada Mumbai, waxaa jira suurtogalnimo weyn oo loogu talagalay ururrada yaryar iyo sidoo kale shirkadaha maxaliga ah ee u shaqeeya. Magaaladan oo ku taala Hindiya waxaa wanaagsan inay tagto meel. Gaar ahaan shaqaalaha khibradda leh.
Helitaanka shaqo ee Kolkata waa dhaqdhaqaaq qulqul ah. Ilaa illaa hadda, magaaladan waxaa ku jira 13 milyan dad ah. Marka, ilaa iyo inta ay dadku helayaan kalsooni. Magaaladu waxay u muuqataa inay weyn tahay. Sababtoo ah dadweynaha. Iyo sidoo kale shirkadaha caalamiga ah. Waa fududahay dadka iyo xiriirkooda caalamiga ah. Hawlaha maamulka. Waa inaad isku daydaa inaad shaqo ka raadsato Kolkata.
Gabagabaynta shaqooyinka Hindiya
Sidaas darteed, haddii aad raadineyso shaqooyinka Hindiya. Waa inaad hubsataa inaad eegto hagayaalkayaga. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaanu bixinaa waxyaabo badan oo macluumaad ah. Gaar ahaan loogu talagalay ardayda cusub iyo kuwa khibrad leh. Waxaan ku siineynaa tusaaleyaal articles. Hoos ka eeg sida aad shaqo uga heli lahayd Idan magaalooyinka ugu fiican. Sidaas, noqo shaqaale farxad leh. Intaa waxaa dheer, isku day inaad isticmaasho nidaamkayaga. Waxaan rajeyneynaa, inaad shaqo ku hesho Hindiya. Kooxdayadu waxay jecel yihiin nasiib wacan.
Shaqooyinka Hindiya - Waxaan bixinaynaa hagaha oo eega sida loo helo shaqo
Shaqooyinka Hindiya waxay ku hagayaan kuwa cusub iyo kuwa khibrad leh. Waxaan ku siineynaa tusaaleyaal articles. U fiirso sida shaqo looga helo Iinta Cities.
Isgaadhsiinta Xiriirka Linkedin
LinkedIn waa goobta shaqada ugu fiican. Dhawaan ayaa la wareegay Hindiya. Dhanka kale waxa ugu fiican ee xiriirada caalamiga ah. Bogga aadka u xiiso badan oo xirfadleydu ku cusbooneysiin karaan resume. Intaa waxaa dheer goobta ugu sareeysa ee lagu helo shaqo-bixiyaha saxda ah. Si aad uga baxdo waxaad ku biiri kartaa kooxaha shaqooyinka si ay ula xiriiraan dadka kale.
Raadinta ardayda ku meel-gaarka ah iyo waxay qabteen geeddi-socodka shaqada. Shirkadda Linkedin oo isticmaalaysa 300 million users. Guud ahaan waxay leeyihiin 100k cusub. Si daacadnimo ah, shirkadani waa tan ugu fiican fasalka. Waxaa intaa dheer, waxaad la hadli kartaa dad aad u xiiso badan oo ku siin kara talooyin dheeraad ah. Fursadaha ugu fiican ayaa ah inaad maalin kasta kula hadli kartid xaddidaad. La kulan, xirfadlayaal.
Dhinaca kale, akhri hagidkayaga. Isku day in aad wax badan ka ogaato. Iyo sidoo kale. Isku day inaad shaqo ka hesho Imaaraadka Carabta. Sidoo kale, fiiri shaqaalaha kale ee ajnabiga ah. Taas oo dhan waxay rajeyneysaa inay shaqo helaan. Gaar ahaan shabakadda bulshada.
Shabakada Xirfadlayaasha Linked for Expats ee magaalada Dubai
Isgaadhsiinta Xiriirka Linkedin. Soo ogow sida aad shaqo uga heli lahayd Emirates. Shirkadda Dubai City waxay bixisaa adeegyo loogu talagalay tartamada dibada ee magaalada Dubai
Maaraynta Maareynta ee Imaaraadka Carabta. Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatey dadka. Iyadoo arrintan maskaxda ku jirta ayaa la bedeli karaa. Maamulayaasha heerka dhexe. Dhab ahaan baad u eegaysaa inaad shaqo qabatid. Gaar ahaan UAE. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo shirkadeena. Ilaa wakhtigan xaadirka ah. Ku takhasusay in la dhigo maamulayaasha. Guud ahaan, Dubai iyo Abu Dhabi. Tani waa sababta shirkadda Dubai City ay noqoto shirkadda ugu sarreysa. In, hal shay oo ku yaal Gacanka.
Xirfadda maamulka ayaa ku filan oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah. Sida xaqiiqda dhabta ah, shirkaddayadu waxay caawimaysaa dalxiisayaasha. Shirkadeena oo saameynaysa saameynta dadka ayaa ku nool. Hadafkayagu waa inaan kaa caawinno inaad gaarto hadafyadaada xirfadeed. Oo waxaan isku dayeynaa inaan sii wadno ilaa aad ka dhigto. Ka dhig mihnaddaada Maareynta runta ah. Isku kalsoonow inaad adigu noqon kartid maamulaha sare ee UAE. Shaqo ka raadso Dubai. U hubso inaad ugu fiican tahay. Shaqo cusub shirkadeena.
Fursada ayaa ka jirta Emirates. Adiga kaliya ayaa kuu ah haddii aad sameyso weynaan. Ku guuleysto xirfad waayeel ah. Si aad u muujiso dhammaadka. 'Waligaa ha sii daynin. Riix resume. Ku bilaw shaqo shaqo ka socota Imaaraadka Carabta. Ujeedada ah inaad noqoto mid gaar ah. Aan rumeyno.
Xirfadaha Maamulka ee Imaaraadka Imaaraadka Carabta iyo Gacanka
Xirfadaha Maamulka ee Imaaraadka Imaaraadka Carabta iyo Gacanka. Maamulayaasha heerka dhexe. Si aan caadi aheyn ayaan u eegeynaa in ay shaqaaleysiinayaan Gacanka
Warbixinta Pakistan iyo hagaha ee UAE
Pakistan waa waddan Muslim ah. Dhamaan qaybta oo dhan waa wax ku saabsan waddankan. Laga soo bilaabo shaqaalaha Pakistani ee Dubai. Waxaa jira maamulayaal badan. Sidoo kale maamulayaasha sare ee kalluumeysiga. Sababtoo ah dadka guuraya. Gaar ahaan waddankan. Wuxuu noqonayaa midka ugu fiican. Iyada oo tan maskaxda lagu hayo, shirkadeena waxay bixisaa macluumaad qiimo leh. Sida xaqiiqda dhabta ah, kooxdayadu waa hagid. Sida loo helo shaqo Dubai sida Pakistan.
Kooxdayada takhasuska leh. Maaraynta macluumaad aad u faahfaahsan. Dhammaan wax ku saabsan Pakistan. Sidaa darteed, caawinta dadka kale waa furaha. Gaar ahaan shirkadda Dubai City. Kooxdayadu waxay shaqaaleyneysaa shaqaalaha. Ka shaqeeya dibadda Pakistan sida Dubai. Ma waxaan samaynaa sida ugu fiican.
Dhinaca kale, shaqaalaha ka yimid meel Muslim ah. In si fiican loo xiro gobolka Gacanka. Kaliya waa dhaqanka isku mid ah. Sidaas awgeed way fududahay. Gaar ahaan qadiyad cusub. Tani waa sababta maamulayaasha dalkan ka yimid. Isticmaalka shirkadeena Dubai. In lagu meeleeyo Imaaraadka Carabta. Ama xitaa dalalka Gacanka. Si fudud sababtoo ah Pakistani waxay leedahay waxbarasho wanaagsan. Kala hadlaya Carabiga. Fadlan fiiri hoosta. Maxaan kuu qaban karnaa. Akhri maqaaladayada ku saabsan shaqooyinka iyo shaqada. Marka loo eego xaaladahaas, sii gal Emirates.
Warbixinta Pakistan iyo hagaha ee Imaaraadka Carabta
Warbixinta Pakistan iyo hagaha ee Imaaraadka Carabta. Pakistan ka heli doontaa wax badan oo qiimo leh articles our. Shirkadda Dubai City oo qoraal ku saabsan dib u dejinta.
Warbixinta dalka Qatar ee qurbaha
Qadar loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Kooxdayadu waa qoraal oo ku saabsan shaqo raadinta. Ka socota Qatar ilaa Dubai iyo Abu Dhabi. Ujeedada laga leeyahay caawinta shaqo doonka, kooxdayadu waxay qoraan waxyaalo dhawr ah. Shaqaale doon ah oo ka socda Qadar si kale. Xaqiiqdii waxay heli kartaa qiimo marka akhrinta boostada. Shirkadeena awgeed. Sababtan awgeed, waxan ku dhejinaynaa Qatari. Ugu badnaan Imaaraadka Carabta.
Marka, sida shaqo raadiyaha, waa inaad fiirisaa. Waxa shirkadeenu kuu qaban karo adiga. Marka la eego xirfad shaqo raadinta UAE. Dhinaca kale, haddii aadan raacin xeerarka qaar. Way adag tahay in la helo shaqo ugu fiican Dubai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo kooxdayada qoraallada qoraallada. Raadinta shaqo ee figradaha waa waxa ugu fiican ee aan samayno. Maareeyayaasha shaqaaleeyayaasha ayaa had iyo jeer sugaya dib u cusbooneysiin cusub.
Sida xaqiiqda ah, maamulayaasha HR. Mar walba raadso siyaabo cusub oo ku caawiya. Sidaa daraadeed, kooxdayada udubdhexaadka ah. Qoraal cusub oo cusub oo ku saabsan shaqaalaha Qatari ee Dubai. Iyo sida loo helo shaqo Dubai laga helo meelo kale oo Bariga Dhexe. Inagoo rajeynayna inaan ku aragno boggeena. Inta badan.
Warbixinta dalka Qadar ee qurbaha ku nool UAE
Qadar waddanka Qatar ah oo loogu talagalay dadka qurbajoogta ah ee doonaya inay u guuraan UAE. Hagaha la dhamaystiray sida loo helo shaqo ku yaala UAE. Laga soo bilaabo shirkadda Dubai City.
Macluumaadka iyo dib u eegista shaqaalaha
Hagaha hagaha iyo qaybo macluumaad ah. Khaas ahaan loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatay in ay la wareegto maamulayaasha. Dhinaca kale, waxaad ka heli kartaa shirkad HR oo wanaagsan. Iyada oo maqaalkan. Isla mar ahaantaana, kooxdayada dib u eegista. Diyaarinta macluumaadka ku saabsan maamulayaasha shaqaalaynta. Iyo wixii ka sarreeya dhammaan shaqaalaheeda ku caawinaya.
Dhinaca kale, Dubai City, dhab ahaantii, waa meel sare loo qiimeeyay. Gaar ahaan maareeyayaasha qorista. Iyadoo ujeedadan, shirkadeenu ku dartay. Qorista iyo shaqaalaynta qaybta. Iyaga oo rajeynaya, waxay caawisaa dadka shaqo doonka ah inay shaqo helaan. Iyo qorayaasha si ay u helaan musharaxiinta.
Ujeedada caawinta dadka kale. Shirkadda Dubai City. Dib u eegista shirkadaha HR ee ugu wanaagsan. Laga soo bilaabo dalalka Gulf. Ilaa illaa Suuqa caalamiga ah. Kuwaas oo dhan waxaa laga heli karaa maqaaladayada. Fadlan fiiri hoosta. Oo aan u qoondeeyno adeegyadayada. Khabiirka takhasuska ah ayaa kaa caawinaya. Ugu dambeyntii, nasiib wacan. Inaad ku aragtid UAE.
Warbixinta iyo dib u eegista milkiilayaasha iyo shaqaalaynta shaqaaleynta. Shaqaalaynta iyo shaqaalaynta shaqaale iyo sidoo kale madaxda HR. Macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo dib u eegista loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Imaaraadka Carabta
Samee tusaalooyin iyo talooyin
Waxay dib u dhigtaa tusaalooyin iyo talooyin ku saabsan helitaanka shaqooyin wanaagsan. Inta badan maamulayaasha shaqaalaynta waxay rajeynayaan in ay helaan casriyeynta ugu wanaagsan. Xaalad xaqiiq ah, ka hor inta aan qofka shaqeynin. Waxaa jira waxyaabo ay tahay in la raaco. Heerka saxda ah ee khibrada iyo sidoo kale hingaad iyo qalad naxwe ahaan. Xaaladaha badankood, codsiga shaqada waa in la sameeyaa lumis. Gaar ahaan maareynta iyo shaqooyinka banaan ee waayeelka.
Codsiyada shaqada ee shaqo raadinta. Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan internetka. CV waa qalab kaliya oo kugu caawin kara inaad shaqo ku hesho dibadda. Aan la kulanno, qoraalladayadu ma hubinayaan dhammaan warqadaha codsiga. Xaaladahaas oo kale, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qoro resume. Guud ahaan, dadka soo diraya saboolka ayaa dib u bilaabay. Mid ka mid ah tusaalooyinka waa dulsaar bixinta. Lambarada taleefanka iyo xiriirka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, shirkaddayada shirkadkeena qoraalka ah Sababta ugu badan ee baahida loo qabo iyo talooyin ku saabsan shaqo raadinta caalamka.
Fadlan fiiri hoosta. Tilmaame-yaasheenu waxay u tartamayaan dadka ajnabigaa Kooxdayadu waxay gacan ka geysatey inay qoraan arjiga xirfadda ee faahfaahsan
Dib-u-dejinta tusaalooyinka iyo talooyinka lagu helo shaqo caalami ah
Samee tusaalooyin faahfaahin faahfaahsan iyo talooyin ku saabsan helitaanka shaqo caalami ah. Soo ogow sida loo qoro CV hab loo shaqeeyaha sida.
Hay'adaha shaqaaleynta ee ajaaniibta
Wakaaladaha shaqaalaynta waxaa badanaa loo abuuraa ujeedada helitaanka shaqo. Iyadoo tan maskaxda ku jirta shirkadda Dubai City oo la talisa dadka shaqo doonka ah. Sida xaqiiqda ah, waxaa jira dhowr ka mid ah. Tusaale ahaan, waxaan u kala qaybinaynaa si kala duwan. Waxaa jira dowlad iyo sidoo kale hay'ad shaqaale shaqsi ah oo gaar loo leeyahay. Dhinaca kale shirkadaha waaweyn ee la shaqeeya hay'adaha shaqaalaynta ee degaanka.
Shirkadda Magaalada Dubai ee kula talinaysa dadka ajnabiga ah iyo muwaadiniinta maxalliga ah. Ku saabsan shaqaaleynta shirkadaha. Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee shirkadaheena soo koobaya waa qiimeyn. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaanu hagaajineynaa shaqaaleeyaha maalin kasta. Guud ahaan waxa ay ka hadlaan dadka ugu habboon ee magaalada
Shirkadda Dubai oo tilmaamaysa inay adeegsanayso adeegyo shaqaale caalami ah. Tusaale ahaan shaqaalaynta shirkadaha Sacuudi Carabiya, Qatar, iyo sidoo kale Koonfur Afrika iyo Imaaraadka Carabta. Filo in aad fiiriso maalin kasta ugu fiican. Iyo kan ugu fiican ee ku salaysan Imaaraadka Carabta. Uma sheegin hay'adaha shaqaalaynta ugu fiican caalamka. Gebogebadii, Kooxda Manpower, Rand Stad, Bayt.
Hay'adaha shaqaalaynta ee loogu talagalay ajnebiga shirkadda Dubai City. Raadi hay'adaha shaqaaleysiinta ugu fiican iyo qorayaasha caalamiga ah ee GCC ee Gulf Jobs.
Tilmaamaha Sri Lanka ee loogu talagalay qurba-joogta Dubai
Sri Lanka macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqooyinka dibadda. Si aan u dhihinno wax dalxiisayaal ah oo horeba ku salaysan Dubai. Isku day inaad adeegsato adeegeena. Iyo inaad aragto kuwa ugu fiican. Dubai iyo Abu Dhabi. In kasta oo tani ay run tahay, Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatey shaqaalaha. Isla mar ahaantaana, caawinta CV. Helitaanka shirkadaha saxda ah. Xaqiiqdii maareeynta fursadaha wanaagsan. Gaar ahaan qurba-joogta Sri Lankan.
Sri Lankan oo ku biiray Imaaraadka Carabta Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayadu waxay caawisaa madaxda. Adeegyada shirkadeena bixisa adeegyo dib u dejin. Tani waa sababta qurba-joogta u soo booqatay boggayaga. Shirkadda magaalada Dubai marwalba waxay dooneysaa inay caawiso dadka ajnabiga ah. Kooxdayadu way caawinayaan. Dhamaan siyaabo kasta oo lagu gaari karo yoolal xirfadeed. Shirkadeena waa mid muhiim ah. Taasna waxaa lagugu meeleyn doonaa UAE. Sababtoo ah Dubai iyo Abu Dhabi. Ma ugu fiicantahay dadka shaqo doonka ah?
Wax badan ka ogow, waxa aan kuu qaban karno. Sida aan kuu caawin karno xitaa raadinta xirfad shaqo. Hoos ka eeg talooyinkeena. Inaad hesho rajo ayaa ku caawin doonta. Gaar ahaan si aad shaqo uga hesho UAE.
Tilmaamaha Sri Lanka ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Qoraallo faahfaahsan oo ku saabsan shaqo ku raadinta Dubai iyo Abu Dhabi. Gaar ahaan dadka shaqo doonka ah ee raadinaya shaqo dibedda.
Koonfur Afrika si loogu shaqeeyo UAE
Dalka Koonfur Afrika oo ka soo jeeda halkaas. Shirkaddayadu waxay daabacdaa qoraallo ku saabsan Koonfurta Afrika. Gaar ahaan shaqaalaha ajnebiga ah. Xaaladahaas oo kale, kooxdayada ayaa wargelinaysa shaqaalaha. Illaa iyo hadda, shirkaddayadu wali waxay caawiyaan dadka shaqo doonka ah. Si aad shaqo uga hesho dibadda UAE. Shirkadda Dubai City ayaa gacan ka geysatay dibad-baxayaasha.
Dadka shaqo doonka ah ee ku jira qorshaha hore. Waxay u baahan tahay in la hagaajiyo. Mar kasta oo ay codsadaan si ay shaqo u helaan. Gaar ahaan Imaaraadka Carabta. Koonfur Afrika ayaa shaqo ka raadsanaya dibadda. Iyadoo taas maskaxda ku haysa, shirkaddayada oo muujineysa hab ay ku shaqeeyaan. Shirkadda Dubai City ee falanqaynta ugu dambaysa. Qoridda tusaha faahfaahsan. Inay ka shaqeeyaan qurba-joogta Koonfur Afrika. Heerka denbiga ee Dubai iyo Abu Dhabi waa mid weyn.
Shaqaalaha South Africans waa kuwo aad u sarreeya. Isla markale, haddii aan ku barbaarinno dalalka kale. Shaqaalaha ka soo jeeda goobtan la yaabka leh. Sameynta jidkooda iyo sameynta horumar. Iyo halkaa, dadka ajaanibta ah ee u socdaalay Dubai ama Abu Dhabi. Waxaa loo baahan yahay in la hagaajiyo habka gaarka ah ee qaab nololeedka Carabi. Waxaa intaa dheer, waxaa jira tiro badan. Dadka ajnebiga ah
Koonfur Afrika si loogu shaqeeyo Imaaraadka Carabta iyo Gacanka. Shirkaddayadu waxay daabacdaa qoraallo ku saabsan dibadda Koonfur Afrika. Gaar ahaan shaqaalaha ajnebiga ah.
Warbixinta Sucuudiga ee shaqada
Sucuudi Carabiya macluumaadka shaqada ee dadka isticmaala maxaliga iyo dadka ajnabiga ah. Dadku waxay sugayaan inay shaqo helaan. Sababtan awgeed, waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga shaqeyn karo. Bariga Dhexe. Arrintan, maskaxda ku hayso, ha ilaashado Sacuudi Carabiya. iyadoo fiiro gaar ah leh qaybtan. Maqaalkeennu wuxuu ku saabsan yahay ka shaqaynta waddankan. Waxaa intaa dheer, ka guuri Sacuudi Carabiya. Ama xitaa sida loo helo shaqo ka jirta wadankan GCC. Xaaladahaas oo kale, fiiri waxa aan kuu qaban karno.
Dhinaca dhinaca wanaagsan ee wadankan. Waa shirkado shaqaaleyn badan oo badan. Waxaa la yaab leh in badan oo kamid ah shaqaaleynta. Guud ahaan wuxuu ku hadlaa Dubai iyo Abu Dhabi. Shirkadeena ayaa dib u eegaysa. Laga soo bilaabo shirkadaha iyo maamulayaasha shaqaaleynta. Dhamaanba ku saabsan dalkan Bariga Dhexe. Dhanka kale, meeshan ayaa tijaabin karta xadkaaga. Maaha wax fudud in lagu guuleysto waddan Muslim ah. Ka shaqeynaya wadamada GCC.
Ka dhig qofka shaqaalaha ah. Xasuusnow wadooyinka ugu adag. Had iyo jeer qaadashada meelaha ugu weyn. Ka shaqaynta Bariga Dhexe. Sameynta shaqo raadiyeeyaal leh khibrad tayo leh.
Warbixinta Sucuudiga ee shaqada. Shirkadeena ayaa gacan ka gaysata oo hagaysa shaqa doonka. Isticmaalayaasha maxalliga ah iyo ajnebiga caalamka. Hagaha Bariga Dhexe.
Macluumaadka dibadda ka shaqee
Ka shaqee dibadda macluumaadka loogu talagalay dadka shaqo doonka ah. Kooxda shirkadda magaalada Dubai ee takhasus u leh Sida xaqiiqda ah, waxanu kaa caawinaynaa inaad shaqo ku hesho dibadda. Dhammaan macluumaadka ku saabsan blogka Dubai. Dhab ahaan waxaa lagu daabacaa iimaan wanaagsan. Sababtoo ah ujeedkeenu waa inaan caawino dadka shaqo doonka ah.
Waxaa intaa dheer dadka xirfadlayda ah. Waa in ay u adeegsadaan hagidkeenna si aan dibadda uga shaqeyno Kaliya ujeedada guud ee macluumaadka kaliya. Maareeyeyaasheena shaqaaleynta ururinta macluumaadka. Bixinta dalabyada shaqooyinka iyo shaqooyinka laga helo bogga internetka. Dadka qaarkood waxay sidoo kale soo dhajiyaan shaqooyin ku saabsan goobta shaqada. taas oo aynaan xakameynin. Tusaale ahaan kooxaha WhatsApp ee Gacanka.
Dhinaca kale, marwalba waxaan sameynay damaanad. Qof kasta oo shaqo doon ah oo isticmaali doona adeegeena. Shirkaddayadu waxay ku saabsan tahay dhammaystirka shaqo-helidda dibedda. Shirkadda Dubai ee wax ku oolka ah ayaa si fiican looga yaqaanaa UAE. Guud ahaan, kooxdayadu waxay bixisaa saxsanaanta macluumaadkaan ku qoran bogga kale ee shaqo.
Tallaabo kasta oo aad qaadato markaad raadineyso shaqo. Hel oo isku dey macluumaadka boggeena. Dib u soo noqoshada magaalada Dubai waa mid aad u khatar ah. Sidaas awgeed waxaan codsanaynaa shaqo doonayaasha. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo buuxa. Gaar ahaan ka hor inta aanad dooneynin inaad u guurto Gulf Jobs.
Fadlan akhri cilmi baaris guud. Iyadoo shirkadda Dubai ee magaalada. Ka hor inta aanad codsanin / ka qaybgalin wareysi kasta oo shaqo ee loo marayo website-ka loo-shaqeeyaha. Sababtoo ah kooxdayada shaqaalaynta waxay ka taxaddaraan shaqa doonka kasta. Waxaan ku faraxsanahay booqdayaasha cusub inta aan daabaceynay resume boggan.
Ka shaqeynta waddan ajnabi ah
Laakiin fadlan maskaxda ku hay, in raadinta shaqooyinku waqti qaadanayaan. Shirkadda Dubai City oo gacan ka geysatay qurbajooga. Taasina waa sababta aan ugu jirno boos aad u sareeya oo ah waddan ajnabi ah. Hadafkeenu waa inaanu shaqaaleyno shaqo doonayaasha. Inta badan ee aan awoodno. Samee dadka faraxsan. Iyo in ay shaqo u siiyaan. Sidaas u sii soco oo akhri hagidkayaga. Fursada shaqo ee dibadda ah. Ugu dambeynna, waqti fiican.
Ka shaqee dibadda si aad u hesho hagis faahfaahsan oo loogu talagalay dadka shaqo doonka ah Waxaadna ogaataa sida loo meeleeyo shisheeye. Waxaanu maamuli doonnaa macluumaadka qiimaha leh ee xirfadda
Barista hagaha shaqada
Barista hagaha shaqada ee Imaaraadka Carabta. Shirkaddayadu waxay caawimaysaa jaamacad si ay u noqdaan macalimiin. Marka loo eego duruufahaas, kooxdayadu waxay qorayaan dhawr qodob. Qaar ka mid ah shirkadaha, gaar ahaan UAE. Raadinta macalimiinta shaqaaleysiinta. Tusaale ahaan jaamacadaha iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. Dhammaantood. Macalimiintu waxay horumarin karaan shaqadooda.
Shirkadaha raadinaya macalimiinta. Job seekers waxay rajeynayaan in ay hagaan. Guud ahaan, akhriyayaasheena. Maareynta xirfadlayaal xirfadlayaal ah ee xeeladaha barashada. Iyo nuqulo macluumaad ah oo run ahaantii shaqeeya. Dhinaca kale, waxaan dib u eegeynaa macallimiinta iyo loo-shaqeeyayaasha gudaha UAE.
Kooxdayadu waxay bixiyaan hagid dhammaystiran macalinka. Shirkadda Dubai City iyada oo la adeegsanayo hage faahfaahsan. Ujeedada si fudud u dhiibo. Iyo helitaanka barashada shaqada. Kooxdayada waxay caawiyaan dadka shaqo doonka ah. Ugu dambeyntii, fadlan eeg hoosta. Oo noqo macalin guuleysta. Dhinaca kale, shirkadda Dubai City. Ma sugeysaa inaad soo booqato maqaaladayada. Shaqo ka raadso Dubai. Oo noqo shaqaale mutadawacnimo ah. Iyo hal wax, akhri hagidkayaga. Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawino.
Barista hagaha shaqada ee Imaaraadka Carabta. Shirkaddayadu waxay caawimaysaa jaamacad inay noqdaan macalimiin Bariga Dhexe iyo Gulf Area.
LinkedIn waa goobta shaqada ugu fiican. Dhawaan ayaa la wareegay Hindiya. Dhanka kale waxa ugu fiican ee xiriirada caalamiga ah. Cinwaanka aadka u xiiso badan ee xirfadleyda ay ku cusbooneysiin karaan cusbooneysiinta. Intaa waxaa dheer goobta ugu sareeysa ee lagu helo shaqo-bixiyaha saxda ah. Si aad uga baxdo waxaad ku biiri kartaa kooxaha shaqooyinka si ay ula xiriiraan dadka kale.
Nidaamka Visa iyo macluumaadka dadka ajnabiga ah
Faahfaahinta faahfaahinta faahfaahinta faafaahinta. Qeybtaan waxaa loogu talagalay shaqaalaha shisheeyaha ah. Kuwa raadinaya macluumaad ku saabsan habka fiisada. Ka ogow shirkadeena macluumaad dheeraad ah. Gaar ahaan ka shaqaynta gobolka shisheeye. Xaaladahaas oo kale, kooxdayadu waxay qorayaan macluumaad faahfaahsan oo faahfaahsan. Xaalad ahaan, xaqiiqda, in ay soo gasho Bariga Dhexe. Dalalka intooda badan, qaabka fiisaha ayaa loo baahan yahay. Laga soo bilaabo safarka ama xitaa fiisada shaqada. Ka hor intaanad safrin, wax walba oo la tixgeliyo, waa shardi. Guud ahaan, wax dhib ah ma jirto meeshaad tagto. Waxaad u baahan tahay inaad isu diyaariso. Baasaboorka waa inuu ahaadaa ilaa taariikhda. Sidoo kale tigidhka.
Marka, hal shay, diyaarinta safarka waa furaha. Tusaale ahaan, dadka ajnebiga ah ee badanaa waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​waraaqo shaqo. Haddaba, qodobadan. Shaqaalaha cusub ee ajnabiga ah ee ajnabiga ah. Dib u eegista hanuuninta. Shaqadayadu waa inaan kaa caawino inaad gaarto xirfad xirfad leh.
Si aad u muujiso kooxdayada inay qoraan qoraalo cusub. Ku dhowaad toddobaad kasta. Tusaale ahaan waxaad u baahan tahay inaad hesho ogolaansho shaqo. Sababtoo ah raadinta shaqo waa hal shay. Iyo helitaanka warqad shaqo waa sheeko kale. Tani waa sababta shirkadda Dubai City oo gacan ka geysanaysa inay la socoto ogolaanshaha shaqada.
Kooxdayadu waxay qoreysaa Bariga Dhexe. Sidoo kale wadamada GCC. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaad ka heli doontaa macluumaad xiiso leh. Ku saabsan ku shaqeynta dibedda dalalka kale. Shaqaaleyaal nasiib wacan. Waxaan rajeynayaa inaan si dhakhso ah kuu aragno magaalada Dubai.
Nidaamka Visa iyo hagaha macluumaadka loogu talagalay dadka ajnabiga ah. Qeybtaan waxaa loogu talagalay shaqaalaha ajnebiga ah. Kuwa raadinaya macluumaadka ku saabsan habka fiisada
Kooxda WhatsApp ee Gacanka
Kooxda WhatsApp ee GCC. Intaa ka sokow, aynu ka hadalno Bariga Dhexe. Shirkaddayadu waxay dadka ka caawisaa inay noqdaan kuwa mutadawiciin ah ee ku nool Bariga Dhexe. Kooxdayadu maareeyaan kooxo shaqooyin dhowr ah. Sida xaqiiqda ah, dhammaantood waa bilaash. Iyo ku dhawaad ​​qof kasta oo ku biiri kara. Falanqaynta bilawga bilowga waxay ku biiraan kooxaha. Sidaa awgeed shirkadahaan oo maskaxda ku haysa ayaa abuuray kooxo shaqaale ah oo dheeraad ah. Dhab ahaantii, waxaan ku bilaabanay Dubai. Markaas qoraalladayadu waxay u dhaqaaqeen Bariga Dhexe oo dhan.
Wakhti yar ka dib, shirkadeena magaalada Dubai waxay adeegsatay adeegyo dheeraad ah. Waxaanu bilawnay furitaanyo kooxo badan oo badan. Xaalad ahaan, xaqiiqda dadku hadda waxay ku biiri karaan kooxaha Gacanka. Sidoo kale Kuwait, Bahrain iyo Qatar. Xirfadlayaasha leh macluumaad badan oo qiime leh. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxay soo dirayaan in ay ku xiranyihiin kooxaha WhatsApp our. Tusaale ahaan, qorayaasha ayaa ku biiraya kooxdeena. Ka dibna soo dhajinta shaqooyinka. Dhamaan shaqaalihii ugu danbeeyay ee codsanaya shaqada Dubai. Ma tahay mid fudud? Haa way tahay. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxa ku jira codsashada Whatsapp. Iyo ku biirista kooxaha. Shaqaaleyaal nasiib wacan. Wax badan oo ku saabsan mowduucan waxaad ka heli kartaa hoos.
Kooxda WhatsApp ee CCC iyo Bariga Dhexe ee Shaqooyinka. Soo ogow sida loo helo shaqo kaliya si ay ugu biiraan kooxaha xirfadaha moobiilka ee Dubai iyo Abu Dhabi
Xirfadda Bariga Dhexe.
Xirfadaha Bariga Dhexe waxaa si xaqiiqo ah looga heli karaa shirkadeena. Waxaan halkan u joognaa si aan uga caawinno dalxiisyada meel kasta oo ka mida globle.
Xirfadaha leh Aetna International
Xirfadaha la leh Aetna International - Bixiyaha daryeelka caafimaadka ee caalamiga ah Aetna International ayaa dhawaan daraasad ku sameysay 2,000 shaqaale musaafiriin ah oo adduunka oo dhan ah, si loo ogaado dhinacyada dhinacyada dib-u-dejinta caalamiga ah ee saameeya caafimaadkooda iyo wanaaggooda ugu badan. Su'aalaha ka mid ah, kormeerayaasha ayaa la weydiiyay inay magacaabaan dhinacyada nolosha ee UAE ay ku arkeen kuwa ugu adag. Sahanku wuxuu daaha ka qaaday: 91% qarashyada ku baxa Imaaraatka waxay heleen 'shukaansi' qaybta ugu adag ee ka guurista dibadda. Tani waxay ka sarreysaa celceliska adduunka (76%) 90% of expats ee Imaaraadka waxay ogaatay in 'shukaansi' ay saameyn ku yeelaneyso wanaaggooda. Tani waa labanlaab celceliska celceliska adduunka (45%) 91% ee kharashyada gudaha Imaaraadka waxay ogaatay in 'helitaanka saaxiibo cusub' ay saameyn ku yeelaneyso wanaaggooda. Tani waa in ka badan labanlaab celceliska caalamiga ah (43%) 40% ee kharashyada gudaha Imaaraadka waxay dareentay 'helitaanka beel' inay saameyn ku yeelaneyso wanaaggooda. Tani waxay ka sarreysaa celcelis ahaan celceliska adduunka (24%) Caqabadaha iyo carqaladaha bulshada ayaa ku kordhinaya Ku darista tirooyinkaan, ee qarashaadka ay ku adkaatay shukaansi, 57% waxay ahaayeen rag halka 43% ay ahaayeen haween. Miyay caqabadahaasi, oo ah shukaansi, ay sababi karaan carqaladaha bulsheed ee ay wajahayaan marka ay halkaa ka guurayaan? Tusaale ahaan, sahanku wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday in: 19% qarashyada ku baxa Imaaraatka ay dareemayaan in lab ama dheddig ay caqabad ku aheyd degitaanka. Tani waxay ka badan tahay celceliska adduunka (13%) 15% ee qarashaadka ku yaal UAE waxay dareemeen in qowmiyaddu caqabad ku ahayd degitaanka. Tani waxay ka badan tahay celceliska adduunka (9%) 6% ee qarashyada ku baxa Imaaraatka waxay dareemayaan in diinta ay caqabad ku aheyd degitaanka. Tani waxay ka badan tahay iskucelceliska caalamiga ah (2%) Of the expats helay jinsiga inuu yahay caqabad, 83% waxay ahaayeen haween halka kaliya 17% ay ahaayeen rag. Sahanku wuxuu sidoo kale daaha ka qaaday, in adduunka oo dhan, takooridda jinsiga ay dareemayaan dumarka inta ugu badan - iyadoo 25% ay sheegtey in jinsiga uu caqabad ku ahaa iyaga, marka la barbardhigo kaliya 5% ragga. Ku saabsan Aetna International: Aetna International waa mid ka mid ah warshadaha hoggaamiyeyaasha daryeel caafimaad oo caalami ah, oo bixiya waxtarka daryeelka caafimaadka in kabadan xubnaha 800,000 adduunka oo dhan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Aetna International [...]
Ma ka heshay?15
0 Akhri wax dheeraad ah
Safarka shaqo raadinta - Hoos eeg qeybta hoose! Hadda dib ugu noqo ujeeddada ugu weyn ee booqashadayda, shaqo raadinta. Laba toddobaad gudahood waxaan ogaaday in xaaladdu ahayn sidii loo ballanqaaday, waa inaan raadsadaa shaqada inta aan ku noolahay halkaas. Waxay ii ahayd naxdin laakiin xaqiiqada lama dafiri karin. Laba toddobaad oo indha indhayn ah kadib, waxaan hubaa inaan dhakhso wax helayo waxaanan doonayey inaan si wanaagsan u salaamo kuwa martigeliyey sida ugu dhaqsaha badan. Ma aanan dooneynin inaan culeys ku noqdo iyaga inkasta oo aysan waligood iga dhigin inaan sidan oo kale dareemayo, xasillooni ma aanan qabin. Waxay ku faafiyaan CV-ga shabakadooda bulshada iyo xirfadeed, waxay diyaarsadeen joornaalada qaarkood halkaasoo ay ahayd inaan ku shaandheeyo shaqooyin ku habboon aniga oo isbarbar dhigaya xogtayda. Waxay ahayd uun bilow. Safarka shaqo raadintu wuxuu u baahnaa hab isgaadhsiin, ujeedadaas aaway martigaliyayaashaydu waxay ii soo iibiyeen shabakad mobiil, shirkad dhowaan la bilaabay wakhtigaas waxay ahayd DU. Maaddaama aan ku jiray booqashada fiisaha, sidaa darteed, way igu adkaan lahayd in aan iibsado sim. Haddii aan dooran lahaa shabakadda waxaan u bixi lahaa Etisalat. Maaddaama Etisalat uu ahaa shabakadda keliya ee la heli karayay taas ka hor, taas oo ka dhigtay shabakaddeeda Bariga Dhexe oo dhan. Laakiin ciidankeygu waxay ii doorteen DU aniga waxayna quseyneysaa dhamaan baahiyadeyda aasaasiga ah ee xagga xiriirka. Marka aniga ayay ila ahayd. Waqtigaas waxaan lahaa khibrad shaqo oo ah ganacsiga kaliya ee safarka, markaa diiradaydu waxay ahayd inaan shaqo ka helo isla isla goobtaas. Meesha la bartilmaameedsaday waxay ahayd Abu Dhabi intii aan halkaas ku noolaa. Maaddaama UAE ay tahay dalka ugu badan ee la booqdo waxqabadyada dalxiiskuna markasta ay ugu sarreeyaan sidaa darteed waan hubaa inaan shaqada helo. Ujeedadaas awgeed, waxaan booqday Malls, meelaha ganacsiga ee Suqs ay ku yaalliin xafiisyada wakiillada safarka. Waxaan u qaybiyey CV-ga anigoo ah warqad-waraaq ama xaashiyaha lagu duubo. Waxay ii ahayd jahwareer iyo layaab aniga haddii aan codsado xisaabaadka shaqada ganacsiga safarka oo aan waayo-aragnimada u leeyahay, waxaa la i weydiiyay wax ku saabsan [...]
Ma ka heshay?6
1 Akhri wax dheeraad ah
Kusoo dhawow Khabiirada qarashyada Ku soo dhawow Sohaib Hasan's LinkedIn Career Feed. Macaamiilyaasha iyo kuwa raacsan oo ka socda bartayada warbaahinta bulshada ayaa lahaan doona quudinta ugu dambeysa ee Sohaib ee maqaallada maalinlaha ah ee Fursadaha Shaqada, Talooyinka Shaqada, Dhiirrigelinta iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa laga yaabaa inaad tahay qof dalxiis ah waa hal cashar dheer oo ay tahay inaan sii wadno… Sohaib Hasan Sohaib Hasan waa qof si habsami leh u socda isla markaana leh khibrad caalami ah oo leh fikir cajiib ah oo ku saabsan waxyaabaha la sameeyo isla markaana si adag u shaqeynaya. Khibraddiisa cajiibka ah ee ah La-Taliyaha HR (Jarmalka, Boqortooyada Ingiriiska, Shiinaha, Pakistan iyo UAE) waxay horey u caawisay kumanaan kun oo shaqo doon ah adduunka oo dhan. Sohaib wuxuu la shaqeeyaa aragti cajiib ah si uu u caawiyo kuwa kale. Waxaana hubaal ah inuu ku dhow yahay tobanaan sano oo guulo ah oo ku sugnaa Dubai. Intaa waxaa sii dheer, in karti loo yeesho howlaha HR, laga soo dejiyo qaabeynta siyaasada iyo Hirgalinta. Iyo sidoo kale Ujeeddooyinka iyo Hormarinta barnaamijyada barnaamijka ku saleysan barnaamijka HR. Illaa iyo qabashada howlaha aasaasiga ah ee HR ee qorista, Xulashada, Tababarka, Horumarinta iyo Qiimeynta Waxqabadka si loo siiyo la-talin khuburo murashaxiinta. Isaga oo leh xiriirkiisa xoogan iyo xirfadaha shaqsiyadeed, wuxuu ku fiican yahay horumarinta xiriirka uu la leeyahay daneeyayaasha gudaha iyo dibedda. Intaas waxaa sii dheer, Sohaib Hasan waxay si joogto ah ugu dadaaleysaa inay ka caawiso ganacsatada inay dhisaan nidaamyo HR oo hufan iyo habraacyo iyagoo dejinaya oo hirgelinaya geedi socodyo iyo istiraatiijiyado wax ku daraya qiimaha marka la eego dhimista qiimaha shaqaalaysiinta iyo kordhinta hufnaanta Kheyraadka. Af hayeenka dhiirrigelinta iyo hadliyaha dhiirrigelinta Sohaib Hasan waa qof dhiirrigeliya oo ku hadla wadnaha iyo tababarayaashii ugu horreyn loo asteeyey xallinta hal-abuurka leh ee sare u qaadidda kartida hay'adda iyo sidoo kale horumarinta iyo baahinta kartida dabeecadda aadanaha. Sohaib Hasan ayaa sidoo kale aaminsan in la caddeeyo waxa qarsoon, ka soo baxa aagagga raaxada iyo jebinta qolofka cabsida. Fikradihiisa dhiirrigelinta iyo kalfadhiyada tababbarka ayaa ka buuxa Tamarta iyo istaraatiijiyadda. Qorista iyo wadaagista fikradaha dhiirrigelinta waa mid ka mid ah waxqabadka qalliinka ku yimaadda oo si taxaddar la'aan ah oo joogto ah u firfircoon. Sohaib Hasan - DUGSIYADA KOOBAN EE MUUQAALKA • Qaadashada xirfadda • Baaritaanka musharraxa, wareysiga iyo xulashada • Tababbarka shaqaalaha iyo horumarka • Himilada & hoggaanka kooxda wada shaqeynta • Dhiirigelinta shaqaalaha iyo hanuuninta & Ka qeybgalka Shaqaalaha • Maamulka khilaafaadka • Kobcinta iyo gaarsiinta agab tababarka iyo waxa ku jira • Horumarinta ganacsiga [...]
Ma ka heshay?4